Xildhibaan ka tirsan Maamul Goboleedka Galmudug oo ku geeriyooday Muqdisho | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Xildhibaan ka tirsan Maamul Goboleedka Galmudug oo ku geeriyooday Muqdisho
Xildhibaan ka tirsan Maamul Goboleedka Galmudug oo ku geeriyooday Muqdisho
Magaalada Muqdisho ayaa waxaa ku geeriyooday Xildhibaan ka tirsanaa Baarlamaanka labaad ee dowlad Goboleedka Galmudug oo lagu magacaabi jiray Axmed Sheekh Yuusuf (Galti).
Marxuumka ayaa waxaa maalmihii lasoo dhaafay uu ku xanuunsanayay Isbitaalka Ordogaan ex Digfeer ee Magaalada Muqdisho, hayeeshee xanuunkii haayay ayuu ugu dambeyn u geeriyooday Xildhibaan Galti.
Geerida Xildhibaan Axmed Sheekh ayaa waxaa xaqiojiyay qaar kamid ah Eheladiisa, waxaana geerida ka tacsiyeeyay Guddoomiyaha Baarlamaanka dowlad Goboleedka Galmudug iyo Mas’uuliyiin kale oo ka tirsan Maamulkaas.
Gudddoomiye Maxamed Gacal Nuur ayaa tacsi tiiraanyo leh u diray Qoyskii, Eheladii, qaraabaddii, shacabka reer Galmudug iyo Umadda Soomaaliyeed ee uu ka baxay Xildhibaan Axmed Sheekh Galti, isagoo Alle uga baryay inuu janada firdowsa ka waraabiyo.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug Maxamed Gacal Nuur ayaa waxaa uu tilmaamay in Marxuumka uu ahaa shaqsi wanaagsan, isla markaana uu kasoo qeyb qaatay shaqooyin kala duwan uu soo qabtay Baarlamaanka labaad ee Galmudug.
Maqaal horeDowladda oo War Cusub kasoo saartay Go’itaankii Internet-ka iyo weli cilad jirta
Maqaal XigaMadaxweyne Deni o kulan la qaatay Waxgarad ka yimid G.Mudug+Sawiro